Nhau - Gumi zvinhu zvinokanganisa mashandisirwo echokwadi ezvikamu zvakakwana
Sezvo isu tese tichiziva, chikonzero nei iko kwekugadziriswa kwezvakanaka zvikamu kunoda kunzi machining kuri chaizvo nekuti maitiro ekugadzirisa uye maitiro edhishu akakwirira kwazvo, uye kunyatso kudiwa kwechigadzirwa kwakanyanya kwazvo, uye iko kugadzirisa kwekugadzirisa kwezvakanaka zvikamu zvinosanganisira kurongeka kwechinzvimbo. Iko kukura kwehukuru, chimiro chakaringana, nezvimwewo, mupepeti anopfupisa zvinotevera gumi zvinhu zvinokanganisa kunyatso kwechokwadi zvikamu zvekugadzirisa:
(1) Iyo yekumonera kutenderera runout yemuchina chishandiso inogona kukonzera imwe kukanganisa kune iyo machining kurongeka kwezvikamu.
(2) Iko kusarongeka kwemuchina chishandiso gwara njanji kunogona zvakare kutungamira mukukanganisa muchimiro chezvakatsetseka zvikamu zvakagadziriswa neiyo workpiece.
(3) Zvikamu zvekutakurisa zvinogona zvakare kukonzera kukanganisa mukugadzirisa mashandisirwo emabasa, inovawo chinhu chakanyanya kukosha pazvikanganiso zvepamusoro zvebasa.
(4) Mhando dzakasiyana dzezvishandiso uye zvigadzirwa zvichavewo nematanho akasiyanasiyana ekukanganisa pakurongeka kweiyo workpiece.
(5) Mukuita kwekugadzira nekucheka, nekuda kweshanduko yenzvimbo yechisimba poindi, iyo sisitimu inokanganisa, iyo inokonzeresa misiyano, uye zvakare inogona kukonzeresa madhigirii akasiyana ekukanganisa pakurongeka kweiyo workpiece.
(6) Maitiro akasiyana ekucheka anozokanganisawo kurongeka kweiyo workpiece.
(7) Zvikanganiso zvinokonzerwa nekupisa kwemafuta kweiyo maitiro system. Munguva yekugadzira michina, maitiro maitiro anozogadzira kumwe kupisa kwekushisa pasi pechiito chemhando dzakasiyana dzekupisa.
(8) Iko kushanduka kweiyo nzira sisitimu nekuda kwekupisa kazhinji kunokonzeresa kuti iko kweye workpiece kukanganisike.
(9) Iko kushomeka kwemuchina chishandiso nekuda kwekupisa kunoita kuti workpiece iumbike.
(10) Iyo yekupisa deformation yeiyo chishandiso ichave nemhedzisiro yakakura pane yekushandira.
(11) Iyo yekushandira pachezvayo yakaremara nekupisa, iyo inonyanya kukonzerwa nekupisa panguva yekucheka maitiro.